ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲမှ သောင်းကျန်သူ ၇၆ ဦးနဲ့ လက်နက်များ ဖမ်းဆီးရမိထား ဆုတ်ခွာသွားတဲ့ TNLAတအောင်း၊ SSAရှမ်း၊AAရခိုင်၊MNDAAကိုးကန့်၊ KIAကချင်ပူးပေါင်းမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့တွေကို ကြည်းတပ်ကလည်း ခြေလျင်တပ်၊ခြေမြန်တပ်၊နယ်မြေခံတပ်တွေနဲ့ နောက်ကနေတောက်လျှောက်လိုက်နေပါတယ်။ လေတပ်ကလည်း Mi35တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ပါ လိုက်ပစ်နေပါတယ်။ သောင်းကျန်းသူတွေက စစ်ယူနီဖောင်းမဝတ်ပါဘူး အရပ်သားလိုဝတ်ထားပြီး သာမန်ပြည်သူတွေကြားထဲဝင်ရော ကိုယ်ယောင်ဖျောက်ကြတယ်ညအမှောင်ကို အားကိုးပုန်းကွယ်ဖို့ကြိုးစားကြပေမယ့် ထင်သလောက်အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ဒီရဟတ်ယာဉ်တွေမှာ ညကြည့်မှန်ပြောင်းနဲ့ ညမြင်ကွင်းရန်သူရှာစနစ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ လောလောဆယ် သောင်းကျန်းသူ ၇၆ လောင်းနဲ့ …
အသက် ၁၃ နှစ် နဲ့ ကိုယ်ဝန် ၅ လရှိခဲ့တဲ့ (၇)တန်း ကျောင်းသူမိန်းကလေး ရဲ့အဖြစ်
မိဘဆရာများ သတိထားသင့်တဲ့ အသက် ၁၃ နှစ် နဲ့ ကိုယ်ဝန် ၅ လရှိခဲ့တဲ့ ကျောင်းသူမိန်းကလေး တစ်ယောက်အဖြစ် မနေ့ က ကျမဆေးခန်းကို ultrasoundကြည့်ဖို့ သားအမိနှစ်ယောက်လာပါတယ် …..သူတို့သားအမိဝင်လာတုန်းကတော့ ရင်သားတဖက်မရှိတဲ့ မိခင်ကို လှမ်းကြည့်ရင်း.လူနာလို့ ထင်မိတာပါ။ နောက်တော့မှ..ကျမသမီးလေးရာသီမလားတာ 3လလောက်ရှိပြီ…..ဗိုက်မှာလည်း အလုံးပေါ်နေလို့ ဆိုမှ ကလေးဗိုက်ကိုစပ်းသပ်ကြည့်လိုက်တော့..ဗိုက်ထဲမှာ ကိုယ်ဝန်က 5လပြည့်ခါနီးပါပြီ… …
အမျိုးသား ၂၈၄ ဦးနှင့်ကာမစပ်ယှက်ပြီးအယောက် တစ်သိန်းပြည့်အောင် ကာမစပ်ယှက်မယ်​ဆိုတဲ့ (၂၁)နှစ်အရွယ်ပိုလန်သူ မြန်မာပြည်သို့ ခရီးဆက်မည်
အမျိုးသား အယောက် ၁၀၀,၀၀၀ ပြည့်အောင် ကာမစပ်ယှက်လိုသည့် အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် ပိုလန်သူက ၎င်း၏အစီအစဉ်အတွက် ဥရောပနိုင်ငံများ အပါအ၀င် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း နှင့် မြန်မာသို့ ခရီးဆက်လိုကြောင်း အော်စတေလီယန်တိုင်း သတင်းစာနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့က ပြော ကြားခဲ့သည်။ အင်နီယာလိုင်စကူစကာ အမည်ရှိ အဆိုပါပိုလန်သူသည် ၎င်း၏ လိင်မာရသွန်ကို …
ကျွန်တော်က သိန်း( ၅၀) ယူတယ်ဆိုပြီး ပြည်သူအပေါ်ကို သတင်းအဆိပ်ကျွေးကျတယ်။ ဒါကတော့သူ့အနေနဲ့ မဟုတ်တာမှန်းသိလျက်နဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမကျေနပ်မှုကြောင့် တိုက်ခိုက်ပြီးရေးသားတယ်… ဒါကိုယုံကြည်တဲ့သူနဲ့ ပြန်လည်မျှဝေတဲ့သူတွေကို စဉ်းစားမရတာက အဲ့လောက်အယုံလွယ်သလားလို့ပါ၊ တကယ်ကျွန်တော်ယူကြည့်ပါလား ခုချိန်ထောင်ထဲရောက်နေလောက်ပါပြီ ကျွန်တော်အကြောင်းက တခြားသူတွေထက် ပိုပြီးတော့စုံစမ်းရလွယ်ပါတယ်.. ခုပွနေတဲ့သတင်းက ဖြစ်နိုင်လား မဖြစ်နိုင်လား ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဓါတ် ဖြတ်သန်းလာပုံ ပညာအရည်ချင်း ပြောဆိုပုံတွေကတောင် ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်… ရဲလုပ်သက်တစ်လျှေက်လုံးမှာ …
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် အိမ်ထောင်သည် ကလေးမိခင်လောင်းတစ်ဦးကို လူယုတ်မာ (၅)ယောက်က အဓမ္မဝိုင်းကျင့်ခဲ့လို့ ဗိုက်ထဲက ကလေးပျက်ကျသည်အထိ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အဆိုပါ အမျိုးသမီးဟာ အသက်(၁၉)နှစ်ဖြစ်ပြီး၊ အိမ်ထောင်ကျတာ တစ်နှစ်လောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ သူမရဲ့ဗိုက်ထဲမှာ (၈)လအရွယ် ကိုယ်ဝန်ကို လွယ်ထားခဲ့ရတာပါ။ ဒီလို ယုတ်မာရက်စက်လှတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကြောင့် အဓမ္မကျင့်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ ခင်ပွန်းဟာ ရှက်လွန်းလို့ မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်သွားခဲ့ပါတယ်။ …
ပြင်ဦးလွင်မြို့နှင့် နောင်ချိုမြို့နယ်များ တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက် ၍ တပ်မတော် က အောက်ပါအတိုင်း သတင်းထုတ်ပြန် လိုက်ပါသည် …. မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ နောင်ချိုမြို့သို့အထွက် ပြင်ဦးလွင်တိုးဂိတ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း နောင်ချိုမြို့နယ်ရှိ ဂုတ်တွင်း ရဲစခန်း၊ ကျောက်မဲမြို့သို့အထွက် နောင်ချို တိုးဂိတ်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးစစ်ဆေးရေးဂိတ်နှင့် နယ်မြေခံ တပ်ရင်းဌာနချုပ်တခုတို့အား …
ဘုန်းဘုန်း အတွက် အသုံးတည့်မယ်ဆို တပည့်တော် တစ်ပြား တစ်ချပ်မှ မယူပါဘူး ဆိုတဲ့ မွန်မြတ်လှသော သိန်း၉၀၀ကျော်တန် ကားအလှူရှင်
ဒီနေ့ ကျွန်တော် အပျော်ဆုံးနေ့လေး ဖြစ်မိတာကို မိတ်ဆွေတွေကို မျှဝေပါရစေ။ ကျွန်တော် ဒီ SURF ကား ၃ခ /၃၈၇၂ အပြာရောင်လေးကို ၂၀၁၁ ခု နှစ်ကတည်းမှ သိန်း ( ၉၀၀ ) ကျော်ပေးပြီး အမြတ်တနိုး စီးလာခဲ့တာ အခုချိန်ထိပါပဲ ဒီနေ့တော့ ကံအကြောင်း တိုက်ဆိုင်စွာပဲ ဘုန်းဘုန်းက ကျွန်တော်ကားလေး …
မုန့်ဟင်းခါးစားပြီး (၂၃၀၀၀) ရှင်းလိုက်ရလို့ ရှော့ရသွားတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ နိုင်းဝမ်း
အဆို​တော်​ နိုင်းဝမ်းက​တော့ ပရိသတ်​​တွေ​ကြွေတဲ့ အနုပညာကို ဖန်​တီးထားနိုင်​သူတစ်​ဦးဖြစ်​ပြီး သာယာ​ပျော်​ရွှင်​တဲ့ အချစ်​​ရေးကိုလည်း ပိုင်းဆိုင်​ထားသူတစ်​ဦးပါ။ လတ်​တ​လောမှာ​တော့ နိုင်းဝမ်းက လတ်​တ​လော နာမည်​ကြီး​နေတဲ့ တစ်​​သောင်း​ကျော်​တန်​ မုန့်​ဟင်းခါးကို သွားစားမိတာ​ကြောင့်​ ​ရှော့်​ရသွားတဲ့အ​ကြောင်း လူမှုကွန်​ယက်​မှာ ​ဝေမျှ​ပေးထားတာ ​တွေ့ရပါတယ်​။ ချစ်​ပရိသတ်​​တွေ​အတွက်​ တဲ​လေးထိုးပြီး ​ရောင်းတဲ့ဆိုင်​မှာ မုန့်​ဟင်းခါး တစ်​ပွဲ တစ်​​သောင်း​ကျော်​တန်​ ဝယ်​စားမိခဲ့လို့ ​ရှော့ခ်​ရသွားတဲ့ အ​ကြောင်း ​ပြောလာတဲ့ …
ခုချိန်ယူမလား မေးရင်တော့ ပြုံးရင်းပြန်ဖြေမိမယ် နေပါစေတော့….
သိပ်ချစ်ပေမယ့် လက်လွှတ်လိုက်ရတဲ့သူတစ်ယောက် ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ သိပ်ဖြစ်ချင်ပေမယ့် မဖြစ်လိုက်ရတဲ့ ဘဝရည်မှန်းချက်လေးတစ်ခုရှိခဲ့ဖူးတယ်။ သိပ်ခင်ခဲ့ကြပေမယ့် နောက်ပိုင်း သိပ်မတွေ့ဖြစ်တော့တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ သိပ်ကြိုက်လို့ အရင်က ခဏခဏနားထောင်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ခုချိန်လုံးဝမဖွင့်ဖြစ်တော့တဲ့ သီချင်းလေးတွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ မဆုံနိုင်တော့တဲ့လူတွေကို မေ့ထား မမြင်ရတော့ကိစ္စတွေကို မျက်နှာလွှဲ… မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကို လွှတ်ချပြီး.. ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတာလေးတွေ ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တာလေးတွေကို သယ်ဆောင်ရင်း ထမ်းပိုးရင်း နောက်ဆုံး သေသွားကြတာပဲ။ လွမ်းလားဆိုတော့ …
ဇနီးသည် မသေခင်က ပေးသွားတဲ့ ပေဗူးလေး ပြုတ်ကျသွားလို့ တံတားအောက် ခုန်ချပြီး ဆင်းဆယ်တဲ့ အမျိုးသား
တစ်ခါတစ်လေမှာ တချို့သော အရာတွေက ကျွန်တော်တို့အတွက် ငွေကြေးနဲ့ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရပါဘူး။ တန်းဖိုးအားဖြင့် သေးသေးကြီးကြီး ကိုယ်တန်းဖိုးထားတဲ့ ပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ အခုလည်း အသက် ၄၁နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ ပန်းပဲဆရာတစ်ယောက်ဟာ သူ့ဇနီး မသေခင်က ပေးသွားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကို ဆုံးရှုံးရမှာဆိုးလို့ အသက်အန္တရာယ်ရင်းပြီး ရအောင်ပြန်ယူခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ဇနီးသည် မသေခင်က ပေးသွားတဲ့ ပေဗူးလေး ရေထဲပြုတ်ကျသွားလို့ တံတားပေါ်ကနေ …